Congo (RDC): Maritrano Ao Bukavu Sy Ny Fomba Hiatrehana Ny Fiainana Ao Kinshasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 14:43 GMT
(Marihina fa tamin'ny 6 Jona 2008 no namoahana ny lahatsoratra teny anglisy)
Mankalaza ny vakoka ara-maritrano ao Bukavu, tamin'ny vaninm-potoana farany nisian'ny lamaodin'ny ” Art Deco ” izay matetika antsoina hoe “streamline moderne” (fampisehoana maoderina mivantana) ny bilaogy Kivu Express. Manolotra sary maromaro amin'ireo tranobe ao an-tanàndehibe izay naorina tany amin'ny taompolo 50 ny bilaogy amin'izao fotoana izao, efa somary bobongolo ireo trano kanefa mampahatsiahy ilay bilaogera ny vanim-potoana izay niantsoana an'i Bukavu hoe “ilay tanàndehibe tsara tarehy indrindra aty Afrika.”
Ao amin'ny fanehoan-kevitry ny lahatsoratra, nahita ihany koa ny mponina iray tamin'ny taompolo 50 tao Bukavu fa iray amin'ireo tanàndehibe tsara tarehy indrindra tao Congo (RDC) izy ity, ary mamelona tsara ny ambiansa tamin'izany fotoana ny sary etsy ambony.
Nanoratra tamin'ny antsipiriany momba ny foto-kevitra hoe “Ahoana ny fomba halafosana ny zavamisy” ao Kinshasa i Don sy Marsha ao amin'ny bilaogy Congo Chatter. Na io fividianana fiara tranainy eoropeana, na tavoahanginà coca feno solika, na tehina, na baolina kitra filalaovana, na kitapon-drano azo amin'ny folo centimes , na atody masaka, na fandriana ambony ambany, na seza; dia hita avokoa eny an-dàlana rehetra eny;
Te-hividy fiara efa niasa ve ianao? 4 na 5 eo ihany ny mpivarotra izany any Kinshasa kanefa tsy dia tena hoe mivarotra fiara efa nampiasaina izy ireo. Matetika amidy eny amin'ny “concessions” eny amin'ny sisin-dàlana rehetra ny ankamaroan'ireo fiara efa nampiasaina…. Saika ny fiara efa nampiasaina rehetra eto dia avy any Eoropa, ary mbola manana ny taratasy fametaka avy any amin'ny firenena Eoropeana niaviany – “B” ho an'i Belzika, “F” ho an'i Frantsa, “CH” ho an'i Soisa, “D” ho an'i Danemark, sns Misy mividy ireo fiara ireo ary alefany sambo eto an-toerana. Ahoana ny fomba hampidirany azy, ny fomba hanomezany laharana azy, ny fomba handoavany hetra any amin'ny governemanta, tsy manan-kevitra mihitsy aho momba izay. Na izany aza, miova foana ny lisitr'ireo fiara ary amidy eny ambanin'ny hazo izy ireo.
Mihevitra ilay bilaogera Kongoley Cédric Kalonji fa ilay mpifanolo-bodirindrina aminy no namorona ny hidim-baravarana mandeha ho azy izay manampy amin'ny fitsitsiana ara-toekarena indrindra .
Farany, manolotra ny taridàlana amin'ny fomba hamantarana ny “tena Z” (Z amin'ny Zairoà) ao amin'ny zanaka ampielezana Afrikana ny bilaogy Le Congo C'est Là. Ohatra vitsivitsy mba hamantarana ny tena “Z” marina:
Tena Z marina ianao raha toa ka ..mitafy akanjo loko marevaka foana .
Tena Z marina ianao raha toa ka..tsy manary ny marika D&G mba hanehoana ny maha-tena izy azy.
Tena Z marina ianao raha toa ka .. rehefa manao dia dia mihoatra foana ny entanao ary tezitra ianao rehefa mitaky anao mba handoa vola ireo entana mihoatra ny mpandray vahiny .
Tena Z marina ianao raha toa ka .. rehefa avy any Congo ianao dia mitondra pondu (ravina mangahazo ) foana ao anaty vata fampangatsiahana kanefa efa amidy any amin'ny tany rehetra izany amin'izao fotoana izao
Lahatsoratra navoakan'i Fred R.